ब्लग-टिपिंग: यो रिडर पेबैक समय हो! | Martech Zone
ब्लग-टिपिंग: यो रिडर पेब्याक समय हो!
बिहीबार, जुलाई 5, 2007 बिहीबार, अक्टुबर 23, 2014 Douglas Karr
हामी एक अर्काको समय खेर फालौं! म तपाईंको ब्लग वा वेबसाइट छिटो र प्रभावशाली ढ help्गले मद्दत गर्न चाहन्छु र तपाईं मेरो ब्लगमा केहि लिंक प्रेम पाउनुहुनेछ।
त्यो उल्लेखले ट्राफिक ड्राइभ गर्नेछ र टेक्नोराटी र खोजी इञ्जिनहरूमा तपाईंको दर्जाको साथ सहयोग गर्दछ। त्यसो गर्नका लागि, मँ तपाईंको ब्ल्गमा लुक्दै छु, र टिप यो!
कसरी तपाईंको ब्लग टिप हुने:
१. तपाईको साइटमा मेरो ब्लग उल्लेख गर्नुहोस्।
२. तपाईंको पोष्टको लिंकको साथ यस पोष्टको टिप्पणीमा मलाई एक रेखा ड्रप गर्नुहोस्।
मेरो वाचा: म तपाईंको लेआउट समीक्षा गर्न केहि मिनेट खर्च गर्नेछु, प्रयोज्यता, एसईओ, र तपाईंको भर्खरको पोष्टहरू केहि पत्ता लगाउन जुन तपाईंको वेबसाइट वा ब्लग ट्वीक गर्न मद्दत गर्दछ। म सबै ब्लग वा वेबसाइटमा टिप अनौंठो बनाउन कोसिस गर्नेछु बरु मद्दत गर्न कोशिस गर्नु भन्दा र सामूहिक रूपमा 'टिप' बहुविध ब्लगहरू।
त्यो हो! आउनुहोस् ब्लग टिपिंग!
यस लिंकमा कसैलाई पनि तपाईलाई मनपर्दो पार गर्न स्वतन्त्र महसूस गर्नुहोस्।
टैग: ब्लग टिपिंगपाठक भुक्तान
गुगल ऐडवर्ड्स: एक जोडी पैसा बचत गर्नुहोस् ...
ब्लग-टिपिंग: कल्पना + नवीनता
म यो राम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दिन।
जुलाई,, २०१ at 6::2007। बिहान
तपाईलाई टिप गरिएको छ! 🙂
हे डग, मैले तपाईको ब्लगमा लिङ्क पोस्ट गरें:
तपाईंसँग साँच्चिकै राम्रो ब्लग छ र मैले वास्तवमै यसबाट धेरै सिक्दैछु।
यो प्रस्ताव कति समय सम्म मान्य छ? मैले गर्नको लागि केहि गृहकार्यहरू पाएको छु (होइन, म यसमा 'ब्लग' मार्फत मैले मेरो सामग्रीमा गर्नु पर्ने सफाईको वर्णन गर्न केही नयाँ काम बनाउने प्रयास गर्ने छैन :)।
कुनै पनि समय, प्याट!
टिप गर्न तयार 🙂
म तपाईंलाई केहि समयको लागि मेरो ब्लग समीक्षा गर्न सोध्न चाहन्छु, र म यसलाई पास गर्न सक्दिन! http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
ब्लग अ in्ग्रेजीमा हुनु आवश्यक छ? धन्यबाद
म गैर-अंग्रेजी ब्लगमा केही सुझावहरू प्रदान गर्न चाहन्छु। ठूलो चुनौती जस्तो लाग्छ। म सामग्रीको न्याय गर्दिन, अवश्य पनि, तर मलाई लेआउट, संरचना, SEO, आदि हेर्न मनपर्छ!
जुलाई,, २०१ at 7::2007। बिहान
नमस्ते फेरि! जवाफ को लागी धन्यवाद!
यहाँ लिंक छ:
डग - तपाईं Hamelife को समीक्षा गर्न वरिपरि जानुहोस् वा नगर्नुहोस् - यो उत्कृष्ट प्रस्तावको लागि धन्यवाद।
मैले मेरो भर्खरको पोस्टमा तपाइँसँग लिङ्क गरेको छु: बाफरे! बेनेट केटीहरू साप्ताहिक लिङ्कहरूमा छन्.
कुनै पनि सल्लाह कृतज्ञतापूर्वक प्राप्त हुनेछ।
मैले मेरो ब्लगरोलमा तपाईंको साइटको लिङ्क थपेको छु, मेरो वेब साइटको तल दाहिने हातमा अवस्थित छ।
जुलाई,, २०१ at 8::2007। बिहान
हम्म, टर्नआउटको आधारमा, म आशा गर्दछु कि तपाईंसँग डग क्लोनहरूको have बिरामी छ
यो कामको लायक छ! के रमाइलो छ कि मैले सुरु गर्दा, म साँच्चै प्रति ब्लग एक मात्र टिप गर्न चाहन्थें - तर मैले सुरु गरेपछि म आफैलाई मद्दत गर्न सक्दिन!
लेख शुक्रबार पोस्ट हुनेछ ... धन्यवाद!
म तपाईंलाई तपाईंको प्रस्तावमा लिन चाहन्छु। तपाईको ब्लगमा पोष्ट गरिएको छ:
र ब्लग म तपाईंलाई टिप गर्न चाहन्छु URL मा छ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, मलाई ईमेल गर्नुहोस्, र धन्यवाद।
कस्तो राम्रो प्रस्ताव डगलस। तपाईको बुद्धि साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। यहाँ मेरो ब्लग टिपिंग पोस्ट छ। दाउद मिराकलको ब्लगमा मेरो सदस्यता हुँदा मैले तपाईंलाई भेट्टाएँ। शान्ति।
मलाई यो मन पर्छ, डग! विन-विन - यसले ब्लगटिपिङको भावनालाई राम्रोसँग फिट गर्छ। 🙂
जुलाई,, २०१ at 11::2007। बिहान
यो एक अद्भुत पदोन्नति हो। म मेरा पाठकहरूका लागि कसरी यस्तै केही गर्न सक्छु भनेर पत्ता लगाउन खोज्दै छु!
यहाँ मेरो पोस्ट छ।
अण्डा मार्केटिङको सानो व्यापार मार्केटिङ ब्लग
महान मार्केटिंग विचार डग। यदि तपाइँसँग मेरो साइट समीक्षा गर्न केहि मिनेट छ भने तपाइँको बुद्धिको धेरै प्रशंसा हुनेछ।
जुलाई,, २०१ at 13::2007। बिहान
डग तपाइँ द्वारा टिपिएको छ http://netglobalbooks.com/blog/
कुनै पनि सल्लाह वा सुझावहरू धेरै सराहना गरिन्छ।
म तपाईको ब्लगबाट थप राम्रो सुझाव र शिक्षाको लागि फिर्ता आउनेछु।
राम्रो यार, कस्तो विचार!
तपाईसँग जोडिएको छ।
डग - म आफैं मास्टरबाट सिकेर आफैलाई प्रतिरोध गर्न सक्दिन
यहाँ मेरो पोस्ट छ
मेरो ब्लगलाई कसरी सुपर चार्ज गर्ने भन्ने बारे तपाईंको विचारहरू मलाई मनपर्छ
तपाईलाई जाँच गर्ने र मेरो मनपर्ने ब्लगहरू मध्ये एक "यर्मिया द्वारा वेब रणनीतिहरू" बाट "BLOG Tipped" प्राप्त गर्ने विचार प्राप्त भयो।
त्यसैले कृपया ओह कृपया मेरो ब्लग टिप गर्नुहोस्! तपाईलाई धेरै अग्रिम धन्यवाद!
ठीक छ, यहाँ अर्को अनुरोध छ।
यो मेरो ब्लग साइट हो, कृपया यसलाई टिप गर्नुहोस्।
जुलाई,, २०१ at 17::2007। बिहान
राम्रो प्रस्ताव। म साँच्चै केहि मद्दत प्रयोग गर्न सक्छु!
डग नमस्ते, मैले पहिले नै हामीलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईंको असल इच्छा उल्लेख गर्दै एउटा पोस्ट गरेको छु
यहाँ लिङ्क छ, धन्यवाद 🙂
म पनि तपाईको बुद्धि प्रयोग गर्न चाहन्छु ...
जुलाई,, २०१ at 20::2007। बिहान
यदि तपाइँसँग अझै केहि "टिपिङ" उर्जा बाँकी छ भने, यदि तपाइँ PPC Hero लाई हेर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई मनपर्नेछ।
ब्लग टिपिङ: अर्को ठूलो कुरा
सोमबार बिहानको लागि निर्धारित पोस्ट:
म तपाईले मलाई फ्याँक्नु भएको कुरा खोज्दै छु - टेम्प्लेट, लेआउट, SEO - केहि र सबै कुरा। म केहि ओभरहालिङ गर्न खोज्दै छु र के काम गर्छ र के काम गर्दैन जान्न आवश्यक छ।
जुलाई,, २०१ at 23::2007। बिहान
यो टिपिङ चीजले तपाईंलाई धेरै व्यस्त राख्छ जस्तो देखिन्छ। यहाँ तपाईंको लिङ्कको साथ मेरो पोस्ट छ:
B2B IT र सोशल मिडिया 2: विक्रेता परिप्रेक्ष्य
धन्यवाद, र शुभकामना!
म प्रस्तावको यो राम्रो पास गर्न सक्दिन।
अगस्ट 1, 2007 बेलुका 3:02 बजे
डग - यहाँ मेरो ब्लगको लिङ्क छ व्यापार विश्लेषकहरू र उपयोगिता पेशेवरहरूका लागि सदस्य-संचालित समुदाय।. म समुदायमा सदस्यता कसरी र्‍याम्प गर्ने र मानिसहरूलाई फिर्ता आउने कुरामा पनि चासो राख्छु। BTW, म Starbucks मा तपाईंको क्याफिन लत खुवाउन तपाईंको अर्को भ्रमणको लागि "प्रि-पेड" छु!
म यहाँ रहेको हाम्रो फिड कोठामा तपाईंको ब्लग पनि थप्दैछु http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
मैले पहिले नै पाउल डुनेसँगको तपाईंको अन्तर्वार्ताबाट लिएको सुझावहरूको लागि धन्यवाद।
डग - तपाईं मेरो ब्लग टिप गर्न वरपर कहिले पुग्नुहुनेछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? मैले मेरो ब्लग 8/1 मा तपाईंको पेन्डिङ सूचीमा थपेको छु र अब यो 10/1 हो — साथै मैले तपाईंलाई पहिले नै Starbucks किनेको छु।
ब्लग - शीर्षक = "वर्तमान बुद्धि"
अगस्ट 2, 2007 मा 8: 11 AM
नमस्ते डग; निश्चित छैन कि मैले यो सही गरें। यहाँ यो महिना मेरो ब्लगटिपिङ छ। मैले मेरो ब्लगटिप्सलाई सुरुमा सुरु गर्दादेखि नै छोटो पारेको छु; र तिनीहरूले अर्को ब्लगलाई अझ बढी उल्लेख गरेका छन् त्यसपछि वास्तवमा उनीहरूलाई सुझावहरू हस्तान्तरण गर्दै। तपाईंले मलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने कुनै पनि सुझावहरूमा म इच्छुक हुनेछु।
अगस्ट 10, 2007 मा 5: 50 AM
इन्फोसको लागि मर्नुहोस्!
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::5। बिहान
त्यहाँ सामाजिक मार्केटिङ मेट्रिक्स को बारे मा पोस्ट को एक श्रृंखला छ। कसैको टेक्नोराटी अथोरिटी र्याङ्किङ बढाउनको लागि मैले यहाँ तपाईंको पोस्टलाई राम्रो उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरेको छु। म पक्का छु कि तपाईले यसबाट मुस्कान पाउनुहुनेछ, यहाँ हेर्नुहोस्:
कहिलेकाहीँ यो निश्चित रूपमा भाइरल हुन्छ तर कोलाज होइन - केवल व्यापार 😉